juillet 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady fahavalo manaraka ny Trinité​
Ivom-bokatry ny Rindra Fanantanjahantena sy Fialamboly (RFF) mankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 20 taonany
“Velomy ny hoby, ka mihirà.” Salamo 98 : 4b
“MIORENA AMIN’NY ANTSON’NY TOMPO”
Alahady miavaka ity alahady ity, tsy noho ny maha alahady fitondrana am-bavaka ny TPM sy ny IFRP ihany, fa indrindra, ivom-bokatry ny Rindra Fanantanjahantena sy Fialamboly (RFF) izay mankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 20 taonany, ao anatin’ny faha 160 taonan’ny Fiangonana Amparibe Famonjena.
Mamarana ny fibanjinana ny lohahevitra eo amin’ny sahan’ny FJKM manao hoe « Miorena amin’ny antson’ny Tompo » isika.
Rakotondramboa Johary, Filohan’ny RFF, no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Rasendrahasina Lala Haja, nasaina manokana, no nitondra ny hafatra amin’izao fotoam-pankalazana izao.
Feon-javamaneno teo am-pidirana ary ny hira “Ianao no heriko” no noventesin’ny RFF teo ampanombohana.
Rehefa vita ny fiarahabana apostolika dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 98 : 1-4, ho fiderana an’Andriamanitra.
Natao ny hira FFPM 167 : 1-3-4 « Midera ny Anaranao » taorian’izany ary nanao ny vavaka ny mpitarika.
Midera sy mankalaza ny anaran’ Andriamanitra. Misaotra noho ny alahady natokana ho an’ny RFF izay Sampana mitaiza mba hiova fo ny rehetra. Mifona anefa ka matoky ny famelan’Andriamanitra ka misaotra indrindra. Mametraka eo ampelatanan’Andriamanitra ny fahatontonsan’ny fanompoam-pivavahana. Mahatsiaro manokana ireo tsy afaka tongo ka mitondra am-bavaka azy ireo.
Andriambolamanana Toky, mpampianatra ao amin’ny K3, no nanatanteraka izany. Ny Teniny ao amin’ny Matio 4:19b no noraisiny: « Andeha hanaraka Ahy, fa hataoko mpanarato olona ianareo ». Niara-novakiana izany. Hevitra roa no nosintominy tamin’izany :
-Handeha hanaraka ahy : baiko sy didin’i Jesoa. Isan’izany ny fandehanana aty am-piangonana. Eo amin’ny fianana koa
-Hataoko mpanarato olona : isika rehetra mety efa nahavita izany. Nitaona ny namana , havana ho tonga aty am-piangonana.
Fehiny : tokony hanana fandavantena hanaraka an’i Jesoa sy hitarika ny rehetra isika.
Nitsangana ny Sampana Sekoly Alahady, ny ankizy sy tanora rehetra, ray aman-dreny, sakaiza nivavaka.
Natao ny hira FFPM 761:1-3 « Ry Jeso, Zoky be fitia ! »
Rajaonarison Mbolatiana no nanolotra ny perikopa voalahatra ao amin’ny Testamenta Taloha : Isaia 6 : 1-8, sy Testamenta Vaovao : Matio 4:18-22 ; Asan’ny Apostoly 9 : 1-19, izay novakiana misesy. Nivavaka izy, nangataka ny Fanahy Masina, mialohan’ny namakian’i Andriantseheno Rasoamaharo Hanitra sy Rabeharimanana Faniry ny Tenin’ny Soratra Masina. Samy mpikambana ao amin’ny RFF avokoa ireo tompon’anjara ireo.
Natao teo am-pitsanganana ny hira FF 6 : 1-2 « Ny teninao » mialoha ny toriteny.
Niarahaba ny Fiangonana eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena ny Mpitandrina Rasendrahasina Lala. Niarahaba manokana ny RFF noho ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny nahatrarany 20 taona ao anatin’ny faha 160 taonan’ny Fiangonana.
Ny Salamo 98 : 4b, ao amin’ny Teny Fanevan’ny RFF no noraisiny : “Velomy ny hoby, ka mihirà.” Toa ny baiko ao anaty tononkira izany tenin’ny mpanao Salamo izany. Io Salamo io irery io ihany no ahitana hoe “fihirana” eo am-piandohana. Misy dikany izany eo amin’ny sitrapon’Andriamanitra satria ity Salamo ity dia salamon’ny kamboty.
Ny kamboty dia tsy manan-kanteherana nefa mbola manana an’Andriamanitra izay andry sy fanantenany ka izany no mahatonga azy hanao izao hira izao ho toa ny fihirana.
Inona ny sitrapon’Andriamanitra amin’izany ?
1)Avy amin’i Jehovah ny hira sy mozika.
Ny feontsika olombelona, hoy ny mpandinika, no zavamaneno tsara indrindra.
Ao amin’ny Genesisy 4 : 21 dia milaza Andriamanitra amin’ireo karazana zavamaneno fototra. Milaza izany fa zava-dehibe eo anatrehan’Andriamanitra sy eo amin’ny Fiangonana izany feo izany. Ny vava no mihoby, no mihira. Izay vao milaza zava-maneno. Tsy tokony atao ambanin-javatra izany.
Fihirana ity Salamo 98 ity. Ny mpandinika ny Salamo dia milaza fa rehefa nohiraina ity dia nohiraina tamin’ny feo efatra. Sitraopn’Andriamanitra izany. Rahoviana ny Fiangonana vao hiverina ami’izany fihirana amin’ny feo efatra izany ? Hatraiza izany fitiavan’ny Fiangonana ny fahatasaran’ny feo izay nomen’i Jehovah azy izany ?
2)Jehobah no vontohatin’ny hira.
Manambara inona moa izany ? Hita ao amin’ny Salamo 98 manontolo ny fanandratana an’i Jehovah ho mpajaka, Mpitsara marina, Mpanonjy milaza ny fahamarinany sy ny fahamasinany. Ny kamboty dia mametraka ny fanantenany ao amin’i Jehovah, eo amin’ny and 9. Fanantenan’ny mino izany.
Manintsy ny fampiasana tsy mety ataon’ny olona ity Salamo ity. Ny fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ankehitriny dia lasa any amin’izao tontolo izao.
Ny olona mahafantatara ny tantaran’ny zava maneno, ohatra ny orga, dia mahalala fa nampiasaina tany amin’ny “boite de nuit”, nefa nalain’ny Fiangonana mba hanintsina, hanaovana ny sitrapon’Andriamanitra, mba ho fantatry ny jentilisa ny voninahitr’Andriamanitra.
Misy olona tonga aty am-piangonana noho ny hira. Ny vontohatiny dia fanozam-boninahitra an’Andriamanitra, fandresena lahatra milaza ny famonjen’Andriamanitra. Hafa ihany ny miaraka mihira aty an-tranon’Andriamanitra fa manome hery, manome fanantenana.
Noho izany, natao teo ampitsanganana, mialohan’ny famaranana, ny hira FFPM “Andriananahary masina indrindra” and 1-5
3)Sitrapon’Andriamanitra, Tenin’ Andriamanitra mibaiko ny mpanao Salamo.
Ataovy manakohako ny feonao, ataovy fantatry ny olona fa faly ianao. Maninona no atao mafy ny feo, maninona no atao avo ny foe ? hisintomana sy fampaherezna ny olona izany. Bakoin’ny Tenin’Andriamanitra isika mba hizara amin’ny hafa amin’ny alalan’ny hira ny famonjena.
Hoy ny mpanao Salamo hoe midera an’Andriamanitra na ny riaka aza, ny zava-manan’aina rehetra, ka maninona isika no tsy hanao izany ?
Misy fikambanan’ny mpitendry zavamaneno ny Fiangonana maro ankehitriny, natao hitaiza ny Fiangonana mba hihira sy hamaoka ny ao am-potsika. Mihira am-panahy sy mihira an-tsaina Ny am-panahy dia ny fo, fa an-tsaina kosa dia mametraka kalitao. Misaotra misy RFF sy “chorale” mametraka izany fahaizana mihira.
Baikoin’Andriamanitra isika mba hihira, mba hihoby ny asan’Andriamanitra sy ny voninahitr’Andriamanitra hitondra fampaherezana sy handinihan-tsika tena ka hiverenana eo amin’ny fitiavan’i Jesoa Kristy ary hitaona ny hafa.
Koa velomy ny hoby ka mihirà. Amena
Voninahitra ho an’Adriamanitra irery.
Feon-javamaneno fohy taorian’ny toriteny ary nohirain’ny RFF ny hira « Kanto »
VAVAKA NOHO NY TENIN’ANDRIAMANITRA​
Misaotra an’Andriamanitra noho ny Teniny manentana ho amin’ny fiderana. Matoky ny Tenin’Andriamanitra izay hanova ny anaty ka hanompo Azy, hahay mahafoy ny tenany ho tena iraka. Mangataka fitahiana mba hanefa tsara izany Asa izany. Mangataka ny hery avy amin’Andriamanitra hahatontosa izany Asa izany.
Niarahan’ny Fiangonana nanonona, teo am-pitsanganana, ny Fanenkem-pinoana laharana 1 ho fanamafisana ny finoana.
ANDRIANTSEHENO Rantotiana no nanao ny tatitr’Asa
“Velomy ny hoby, ka mihirà” : Lohahevitra amin’izao taom-pankalazana an’Andriamanitra noho ny 20 taona nijoroan’ny RFF;
Ny tanjon’ny RFF : fanabeazana sy fifampitaizana amin’ny alalan’ny fanantanjahantena sy fialamboly ary fianarana Sorara Masina. Ny mpikambana dia ankizy, tanora, ray aman-dreny eto Amparibe sy ivelany.
Tatitr’ASA nandritra ny fotoana novambra 2020 hatramin’izao no natao.
« Ny voninahitra » no hira nohirain’ny RFF taorian’ny tatitr’Asa
Rakotomanana Andry, Mpitantsoratry ny Fiangonana no nanatanteraka izany.
I Korintiana 17: 3b « fa masina ny tempolin’Andriamanitra, dia ianareo izany. »
Toy izao manaraka izao no santionan’ny ilaina hofantarina :
-Eny amin’ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana ny fahamoahana ireo Mpitandrina 122 androany amin’ny 11 ora sy mpampianatra 61 amin’ny 2 ora sy sasany, eo anivon’ny FJKM
-Alarobia 28 jolay : fampianarana eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena hataon’ny Mpitandrina Rahrijaona Solofonirina. Ny lohahevitra : “ Ny asafitoriana ny Filazantsara manoloana ny hamehana ara-pahasalamana”
-Sefala : miova ny daty famohahana ireo Mpitoriteny, Mpiandry ary Katekista. Ny 28 septambra dia efa hanomboka raha novambra izany isan-taona. Samy manana ny datiny ireo ivon-toerana tsirairay avy
-Fivorian’ny ankatoky ny Fandraisana aorian’ny fanompoam-pivavahana
-AFF : hanatanteraka ny tafika masina ivelany. Roa no faritra handehanana : Fiangonana Ambohipiara ny 13 hatramin’ny 15 aogositra sy Bevoay (faritra Ambovombe) ny 13 hatramin’ny 23 aogositra. Ny alahady 1 aogositra no fanirahana ireo mpiantafika.
Ranaivoson Jacky, Biraom-piangonana, no namaky ireo voady sy raki-pisaorana
“Aoka hifaly sy hiravoravo Aminao izay rehetra mitady Anao ; Ary aoka izay tia ny famonjenao hanao mandrakariva hoe : Ankalazaina anie Andriamanitra ! ” (Salamo 70:4)
Ireto manaraka ireto ireo hira nangatahan’ireo nanatanteraka voady sy rakim-pisaorana :
RFF “Saingy tsy foinao”, “Tompo ô, fantatrao”, “Mandehana, manarana” ; HF 12 “Feno toky” (natao mialohan’ny Tsodrano) ; FFPM 20 : 1 ; FF 11
Ny hira FFPM 441:3 « Raiso ny fahaizako » no hira vavaka natao teo am-pitsanganana ho fanavaozana ny fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra. Nofaranana tamin’ny “Amena”.
Notohizina tamin’ny feon-javamaneo
Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nanohy, nanao ny vavaka fangatahana.
Manentana mandrakariva ny Tompo mba hiorenana amin’ny antsony ny vahoakany. Nampahafantatra Ianao tamin’ity fotoana ity fa avy amin’I Jehovah ny hira sy ny zava-kanto ary ny zavamaneno mba hanarahana ny baiko sy ny sitrapon’Andriamaninitra, hijoroana ho vavolombelona.
Na dia salamon’ny kamboty aza izany dia mila mahatsaro fa ny hira sy ny mozika dia avy amin’Andriamanitra.
Mivavaka ho an’ny Birao Foibe tarihin’ny Filoha, ny Mpiandraikitra Foibe, ny mpanatanteraka sy mpandraharaha. Mitondra am-bavaka ny Synoda Lehibe hatao any Sambava ho vita soa.
Mivavaka ho an’ny SPA tarihan’ny Presida sy ny birao, ny mpandrahraha ary ny Fiangonana rehetra. Mivavaka ho an’ny SSA, ny vaomiera indrindra ny eto Amparibe Famonjena mba hiasa amin-kery anie ny Tompo indrindra amin’izao ao anatin’ny faha 160 nijoronan’ny Fiangonana izao. Mivavaka ho an’ireo rafiftra mankalaza an’Andriamanitra noho ny faha 20 sy 30 taona nijoroany. Tsaroana manokana ny RFF izay mbola maro ny fikasana ka hiasa amin-kery. Ho tontosa anie ny “Grand Concert” d’orgue ho tanterahana ny tolakandro. Misaotra ny Mpanompon’Andriamanitra nitondra ny hafatra. Ny Tompo anie hijery manokana azy amin’ny asany sy ny ankohonany. Mivavaka ho an’ny TPM sy ny IFRP ; ireo havana Malagasy kere any atsimo hanana tandrify sy ho ahanina. Mafy ny Covid 19, ho fongotra tanteraka anie izany. Mivavaka ho an’ny fanombohana ny fanatanterahana ny trano atsimo. Mivavaka ho an’ireo sahirana, marary, mana-manjo, ireo manana hataka manokana rehetra. Mivaka ho an’ireo mpanompo nanao rakim-pisaorana sy nanao voady masina : nangata-bavaka sy nisaotra momba ny asa, fanadinana, fiadanampo, fifaliana, fitahiana eo amin’ny tokatrano, ny RFF hajoro tsara, ireo afaka fanadinana, nanao fanadinana sy mbola hanao fanadinana ; miantehatra amin’ny Tompo hametrahana ny fikasasan rehetra.
Izany vavaka izany dia natambatra, ho amboara tokana, amin’ilay vavaka nampianarin’ny Tompo manao hoe : “Rainay izay any an-danitra…”
Natao teo am-pitsanganana ny hira HF 12 « Feno toky » ary novakina ny tondrozotra 2021.
Nohiraina ny hira FFPM 625 : 3 « Ry Kristy be fitia ! », nofaranana tamin’ny Amena nohiraina.
Ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra !
Alahady 18 Jolay 2021
ALAHADY IVOM-BOKATRY NY VONDRONA FOTOTRA LAIKA
Alahady ivom-bokatry sy natokana hitondrana am-bavaka ny Vondrona Fototra Laika eto amin’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena androany. Rajaonarison Rivo, Diakona, Filohan’ny Vondrona Fototra Laika, no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatra. Ny vaomiera Aim-panahy no nandrindra ny fanompoam-pivavahana. Andriamasinoro Anjambola, no nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny. Andriamasinoro Nantenaina, no namaky ny Soratra Masina. Ny Marka 10: 46-52, no nanompanana ny hafatra ho an’ny mpianakavin’ ny finoana.
Fotoana manokana ihany koa, ho an’ny foibe androany, nanaovan’ireo mpianatra ao amin’ny kilasy K1-K5 ny fanadinana sekoly alahady. Fotoana nitondrana am-bavaka koa ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana BEPC. Ary nahatsiarovana ny fankasitrahana an’Andriamanitra, noho ny niasan’Andriamatoa Razafindratrimo Alain 20 taona teo anivon’ny synodam-paritany sy fankalazana ny faha 25 taona ny vondrom-paritany VFL ao anatin’ny synodam-paritany.
Mialoha ny fanombohan’ny fanompoam-pivavahana, nisy ny fianarana ny hira fanevan’ny jobily faha 160 taonan’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena. Feon-javamaneno no nanombohana ny fotoana.
Litorjia amin’ny endriny fahatelo no nitondrana ny fotoana anio izay alahady fahafito manaraka ny Trinite anio.
FIARAHABANA APOSTOLIKA SY FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA
Ho fiderana an’Andriamanitra dia novakiana ny Salamo 116:12-14 “Inona no havaliko an’i Jehovah noho ny soa rehetra nataony tamiko? Handray ny kapoaky ny famonjena aho. Ka hiantso ny anaran’i Jehovah. Hanefa ny voadiko amin’i Jehovah aho. Eny, eo anatrehan’ny olony rehetra”.
Natao ny hira FFPM 295:1-2: Miorena mafy tsara”, narahana vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra. Nisy feon-javamaneno fohy taorian’izany.
Ramanandraibe Ravosson Haingo, Mpampianatra K7, no nitondra ny fampianarana. “Hianao no Kristy zanak’Andriamanitra velona” Matio 16:16b.
Taorian’ny vavaka, dia nazavainy ny andian-tSoratra masina, izay manambara ny fanontaniana napetrak’i Jesoa tamin’ny mpianany. Toy izany koa ho an’ny Fiangonana: Iza moa Jesoa amintsika? Jesoa eto dia ilay Jesoa Kristy Zanak’Andriamanitra velona. Andriamanitra velona mamonjy antsika. Ohatra any Asia dia misy ny olona no manaraka Andriamanitra maty. Ny antsika kosa Andriamanitra velona. Noho izany tsy diso safidy isika manaraka ny Andriamanitra velona.
Natao ny hira FFPM 28:1-2 “Zanahary tsy mba tia“, mialoha ny vavaka sy ny famakiana ny Soratra Masina. Ny perikopa novakiana androany dia ny Testamenta Taloha Amosa 7: 10:17, ny Testamenta Vaovao Marka 10: 46-52, sy ny Epistily Filipiana 3:12-16.
Rehefa vita izany famakiana ny Soratra Masina izany dia nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira FFPM 24:1-4 “Ny lanitra ao ambony ao”.
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Ny teny nangalana ny hafatra dia avy ao amin’ny Soratra Masina ao amin’ny Marka 10: 46-52. Izay manambara ny tantaran’i Bartimeo jamba mpangataka, nipetraka teo amoron-dalana.
Notsiahivina tamin’izany ny antony nananganana ny vondrona fototra laika sy ny mpamorona izany sampana izany dia ny Mpitandrina Ramino Paul teto amin’ny Fitandremana. Maro ny mpiangona sy ny mpianakavin’ny finoana, olomanga, izay tsy tao anatin’ny sampana , ary manana ny fanomezam-pahasoavana ao anatin’ny Fiangonana.no mivondrona ao anatin’izany.
Azo hoarina amin’ny jamba mitady izay tokony atao eto, ny vondrona fototra laika.
Araka ny tantara, ny olona mpanota na zanaky ny mpanota no tratry ny hoe jamba. Ny fahitana sy ny antsoantson’i Bartimeo an’i Jesoa, zanak’i Davida, dia maneho eto ny finoany sy ny fanantenany. Ary tsy manantena fotsiny fa mitady ny famindrampo ihany koa. Tsy nahalala menatra, tsy natahotra, ary tsy voasakana izy.
Eto dia tsy misy diplomasia rehefa mitady ny Tompo na dia mahamenatra aza izany. Nisy vokatra izany. Tokony hianatra toy i Bartimeo koa isika. Rehefa ny olona no hafahafa (Amosa 17), dia aleo toy ny Bartimeo. Ny hafatra dia mampitandrina antsika ary mampiomana mba hibebaka.
Fahatokiana ny fanatonany ny Tompo: Rehefa izay no teny azo avy amin’ny Tompo dia noraisina tamim-pifaliana. Ny lesona hampitaina amintsika dia ny fampahafantarana sy ny fanehoana:
• ny fananana finoana tsy misy fisalasalana
• ny fanantenana efa lalim-paka tao amin’i Bartimeo : olona mahatsapa sy mankasitraka. Tonga mpianatr’i Jesoa izy, mahiratra ara-panahy. Jamba ary nahiratra.
Tsy Bartimeo jamba akory ny laika eto. Ankehitrio kosa dia olon’i Kristy ny vondrona fototra laika.
Fotoana hanaovan’ny sampana sekoly alahady fanadinana androany. Mba ho voataiza tahaka an’i Bartimeo ny zanatsika. Toy izany koa ireo hanao ny fanadinana BEPC, mba ho afaka fanadinana daholo ny zanaky ny Fiangonana: Bartimeo jamba ka lasa nahiratra. Entina am-bavaka sy manorina ny fiainany ao amin’ny Tompo.
Taorian’ny hafatra izay narahana feon-javamaneno fohy dia natao ny vavaka setry ny Tenin’Andriamanitra sy ny vavaka fifonana. Nohiraina ny hira FFPM 428:1-2-3 « Reko izao ry Tompo ». ”. Natolotra teo am-pitsanganana ny Teny famelan-keloka.
Natao ny hira FFPM 469:1-2-3 “Jeso o, Mpitia anay”. Niarahana niredona ny fanekem-pinoana laharana faha 3. Nisy ny feon-javamaneno fohy tao anatin’ny vavaka mangina.
Taorian’ny hiran’ny Sampana Tanora Kristiana, dia novakian-dRabako Ralambonirina Hanta, Diakona, ny tatitry ny asa ny VFL, ary Ramiadamanana Josiane, Diakona, no nanao ny tatitra avy amin’ny foibe. Nanao ny anjara hirany ny VFL.
Ny mpitantsoratry ny Fiangonana Rakotomanana Andry no nanao ny filazan-draharaha taorian’ny andinint-Soratra Masina IKorintiana 3:17b “Fa masina ny tempolin’Andriamanitra dia ianareo izany ». Toy izao manaraka izao ny vaovaom-piangonana hampitaina amin’ny mpianakavin’ny finoana:
• FJKM Ivato Seranana alakamisy 22 jolay : fanasana noho ny fitokanana ny Filoha synodaly faritra andrefana
• FJKM Ambavahady mitafo : fanokanana Masera MaMeRe
• FJKM Katedraly Analakely : fanompoam-pivavahana Vondrona fototra laika
• Fanokanana Mpitandrina (11ora atoandro) sy Mpampianatra (3ora hariva) ao Antsahamanitra.
• Mianatra ny katekomena
• Herinandrom-bokatry ny RFF manomboka ny alatsinainy 19 jolay 2021
• Fanasana hanatrika ny “soutenance de mémoire” Mpitandrina miana-draharaha efatra mianadahy, teto amin’ny Fitandremana, izay atao amin’ny Faculté de Théologie Ambatonakanga:
2. Ramilison Diamondra
3. Razafinarivo Andriatsilavina Nofy
4. Njaratina Elisa.
• Maraimbaovao : isaky ny asabotsy amin’ny 6ora 30 maraina
• 25 jolay :
1. Famaranana ny taom-pianarana ho an’ny sampana sekoly alahady
2. Fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 20 taona sy herinam-bokatry ny RFF . Grand concert d’orgue iarahana amin’ny mpanakanto samy hafa
Ralaindimby Haja no namaky ny vetsovetsom-pon’ny mpianakavin’ny ny finoana nisaotra sy nangata-bavaka androany. Novakiana ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Lioka 10:17.
Ireto avy no hira nangatahina:
• FF 20:1: «Efa trotraky ny adin-tsaina»
• FF 46:1 “Mba tantanonao ry Raiko!”
• Hira FFPM 36:1 “Moa ho haiko tantaraina”
• Hiran’ny Finoana: Feno toky
• Hira FFPM 809:1 “Jesoa Sakaizan’ny zaza”
Natolotra ny fanatitra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka FFPM 275:1-4: “Raisonao ry Tompo soa“.
Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina ary nofaranana tamin’ny Rainay Izay any an-danitra izany.
Natao ny hira FFPM 630:1 “Ry Jesosy mba tantano “, novakiana ny tondrozotra ary nomena ny tsodrano. Notohizana tamin’ny hira FFPM 731:1: “Enga anie ka homba anao Jeso” ho famaranana ny fotoana. Samy nanao ny vavaka mangina ary nisy ny feon-javamaneno firavana.
Nitendry orga : Ranaivoson Jacky /Rakotonarivo Hery
Naka ny sary : Andriamampianina Faneva